नेकपा एकताबाट जनताले के पाए ? एकता कति सार्थक ? - www.khabardabali.com | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more नेकपा एकताबाट जनताले के पाए ? एकता कति सार्थक ? - www.khabardabali.com
जेठ ३ गते, २०७७ - १५:३९
जेठ ३ गते, २०७७ - १५:३९ मा प्रकाशित
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कम्युनिष्ट सरकार सधैं अल्पमतमा पर्ने, जनमत भएर पनि विभाजित हुने, जनमत भएर पनि पार्टी संसदमा सधैं जालझेलमा पर्ने अनि अर्को वर्गले जीत्ने स्थिति बनिरह्याे । २०४६/०४७ पछिको परिस्थितिलाई हेर्दा सधैं जनपक्षीय हिसाबले हाम्रो जनमत प्रचुर रहने तर संसदमा गईसकेपछि हामी कमजोर हुने स्थिति देखा परिरह्यो । जहाँ दक्षिणपन्थीहरु हाबी हुने र जनपक्षीय कामहरु नहुने स्थिति बनिरह्यो ।
त्यहि परिस्थितिकै कारण तत्कालिन नेकपा एमाले र तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रका बीचमा एकता भएको हो । दुई पार्टीबीच एकता हुँदा वास्तविक जनमत हामीले संसदमा देखाउने स्थिति पनि बन्यो । आज ६ वटा प्रदेशमा वामपन्थीको प्रदेश सरकार र केन्द्रमा झण्डै दुई तिहाई जनमतसहितको संघीय सरकार बन्ने स्थिति बनेको छ । यसले दिर्घकालिन रुपमा उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गको हितमा काम गर्न सुरु गरेको छ । दोस्रो कुरा, अब यसको जगमा रहेर हामी स्थानीय तहको सरकारमा पनि वामपन्थीको वर्चस्व कायम गराउन सक्छौं ।
विकासको मोडेलहरु पनि जनताको पक्षमा, गरिबको पक्षमा, विपन्नको पक्षमा, अप्ठ्यारो परेको वर्गको पक्षमा जसरी हुनुपर्ने हो त्यो कम्युनिष्ट सरकारले मात्रै गर्न सक्छ । केन्द्र र तल्लो तहसम्म हाम्रो वर्चस्व भएसँगै जनताको पक्षमा हाम्रै नेपालको विशिष्ट परिस्थितिको आधारमा विकासको मोडलहरु लागु गराउन सक्छौं । हामी जनताको पक्षमा विकासको मोडेल बनाउन सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने वामपन्थीहरु, त्यसमा विशेषगरि अर्थशास्त्रीहरु, योजनाविद्हरु र हामी सबैको लागि चुनौति पनि हो । त्यो गर्न सक्यौं भने नेपालको विकासको मोडेल वामपन्थीहरुको वर्चस्वको जगमा रहेर हामीले दिन सक्यौं भने सदियौंसम्म एउटा पराधिन मनस्थितिबाट मुक्त हुँदै अगाडि बढ्न सक्छौं । राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्दै छरिएको पुँजीलाई एकत्रित गर्दै हामी अगाडि जान सक्छौं । मलाई लाग्छ, वामपन्थी एकताले निकै धेरै सम्भावनाका द्वारहरु खोलेको छ ।
नेकपाभित्र सिद्धान्तमा कसैको विभक्त मनोविज्ञान देखिँदैन् । माथिदेखि तलसम्मका नेता तथा कार्यकर्तामा कुनै खालको दुविधा छैन् । सिद्धान्तमा विभाजन छैन् भने चलायमान पार्टीमा काम गर्ने शैली, व्यवहार र आचरणको बारेमा लिएर टिप्पणी हुनु सामान्य कुरा हो । यी सामान्य कुराले पार्टी एकतालाई असहजता तिर लैजान्छ भन्ने लाग्दैन् । त्यसको परिकल्पना कसैले पनि गरेको छैन् ।
(देवकोटा नेपाल बुद्धिजिवि संगठनका संयोजक हुन्)
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन जसरी विभाजन र विग्रहको स्थितिबाट गुज्रदैं थियो त्यो समय कम्युनिष्ट पार्टीको बीचमा एकता हुनु अनिवार्यता बनेको थियो । दुईवटा पार्टीको बीचमा एकता भयो त्यो अत्यन्तै राम्रो कुरा बन्यो, जसलाई जनताले पनि जनमत दिएर अनुमोदित गरे । तर पार्टी एकता अहिलेसम्म पनि भनेजस्तो भएको छैन् । उहि औपचारिकता पुरा गर्न पार्टी एकता गरिए जस्तो भएको छ । बाहिरबाट हेर्दा एउटा पार्टी तर भित्रबाट हेर्दा पार्टीभित्र पनि विभिन्न पार्टी । वास्तविकता नलुकाई भन्ने हो भने, नेकपाभित्र नाम मात्रैको भएको छ ।
नेकपाभित्र मौलाएको गुटले नेकपाको सरकार सञ्चालन, नेकपाको पार्टी सञ्चालन र आजको राजनीतिमा दुई तिहाई बहुमत नजिक भएको सरकारले जनताको बीचमा जुन खालको नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याउनु पथ्र्यो त्यसमा अन्यौंलता देखिन्छ । पार्टीमा कसिलो एकता नहुनु नै यसको समस्या हो ।
जसरी समाजवाद उन्मुख लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको परिकल्पना गर्ने भनि पार्टी एकता गरिएको थियो त्यो अहिले पुरै अन्यौंलमा पुगेको छ । पार्टी एकताले त्यतातिर गति लिन सकेको छैन् । यसलाई प्रष्ट भन्दा अहिलेसम्म नेकपाले सामान्य अपेक्षा पुरा गर्नेतर्फ पनि कदम चालेको छैन् ।
लामो समय बित्दा पनि पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्न भएको छैन् । एकता भएका संगठनभित्रको मनोविज्ञान के छ भनेर हेर्दा त्यहाँभित्र आ–आफ्नो पार्टी, आ–आफ्नो समुह र फरक–फरक मनोविज्ञान भएको देखिन्छ । पार्टी माथिदेखि तलसम्म हेर्दा त्यति राम्रो भावनात्मक एकता, संगठनात्मक एकता भएको देखिंदैन् । मात्रै प्राविधिक एकता भएजस्तो देखिन्छ । यसबाट जनअपेक्षा पुरा हुने कुरा सम्भव हुँदैन् ।
(तामाङ्ग अनेरास्ववियूका सह–संयोजक हुन्)